Saddex Arrin Oo Cajiib Ah Oo Ku Dhaafay Hadii Aadan Daawan Kulankii Ay City Silcisay Chelsea %
Manchester City ayaa iska sii wada guulaha ay gaareyso Isbuucaan, waxayna markaan dul-martay Chelsea, kadib markii ay uga soo adkaadeen iyagoo jooga Etihad Stadium 1-0, xili goolka uu dhaliyay Bernardo Silva.
Sikastaba, guushaan ayaa waxay siiseysay naadiga Macalinkii hore ee kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich inay ku qabtaan hogaanka Premier League 18 dhibcood, waxayna ka sareeyaan Liverpool, oo kaalinta labaad ku jirta.
Taageerayaal Garab Istaagay Pep Guardiola
Qaar kamid ah, taageerayaasha kooxda Manchester City ayaa waxay soo qaateen boor weyn, kaasoo ay kusoo qoreen Erayo umuuqday kuwa ay ku amaanayeen macalinkoodaan, kaasoo hada guulo waa weyn usoo hooyay.
“Ciidankii Baluuga iyo Cadaanka ee Guardiola” ayaa ku qornaa Boorkaan, kaasoo qeyb kamid ah garoonka laga soo qabtay sawir laga soo qaaday.
Weerarkii Chelsea Oo Liitay
Waxaa ugu dambeysay Tobban sano ka hor in kooxda kubada cagta Chelsea kaliya ay sameyso qeybta koowaad Hal Shuud ama Laad, waxaana ay taasi dhacday kulankii Shalay guul darada la kulmeen.
Xaqiiqo uruuriyaha Opta ayaa wuxuu bilaabay islamarkaas inuu soo tabiyo sheekooyin ku saabsan arrintaan, waxayna tani muujineysa sida ay Chelsea weerarkeeda u ahaa shalay mid aad tacbaan u ah.
Benardo Silva Oo Mar Kale Is-muujiyay
Laacibkaan dalka Portugal udhashay ayaa wuxuu ciyaartaan ka sameeyay saameyn xoog leh, kadib markii uu dhaliyay goolkii kaliya ee farqiga ukeenay labadda kooxood, waxaana uu yimid goolkiisa qeybta labaad.
Wuxuu umuuqdaa mid jecel inuu goolal dhaliyo kulamada waa weyn, iyadoona la xasuusto tii uu kusoo dhigay Arsenal, markaasoo uu labo gool kaga dhaliyay gurigooda Emarites, isagoona sidoo kale ciyaartii Final-ka shabaqa gaaray.
EPLMan City vs ChelseaPremier League
Inuu Rabo Zidane Uu Ku Wajaho Sida Ugu Fiican, Xaalka Di Maria & Unai Emery Oo Real U Goodiyay